Uphawu lobuqu kwiMithombo yeendaba yeNtlalo yeyona ntengiso inganyanisekanga ekhoyo Martech Zone
NgoMgqibelo, Septemba 17, 2016 NgoMgqibelo, Septemba 17, 2016 Douglas Karr
Libala ukutya kunye neentengiso zokuthandana; Ndicinga ukuba ezinye zezona ntengiso zikhohlisayo zikhona kwi-Intanethi zezona ngcali zentengiso eziqhubeka nokugxeka iimveliso kunye nokushumayela ukungafihli kwi-intanethi.
Akunanto ngaphandle kokucaca.
Ndikwixesha elinomdla ebomini bam. Ishishini lam liqhuba kakuhle, ubomi bam buhle kakhulu, kwaye impilo yam iya isiba ngcono inyanga nganye edlulayo. Oko kwathethi, ishishini lethu kunye nobomi bam buqu ziseneengxaki ezinkulu. Ndiyayiqhula loo nto, ngoku ndiqale amashishini ambalwa endikuwo ayisebenzi, Ngekhe ndibuyele kwingqesho esisigxina. Ngenxa yoko, akukho mfuneko yokuba ndizenze kwaye ndigcine uphawu olugqibeleleyo kwi-intanethi.
Kwinyanga ephelileyo, ndiye ndancokola nabantu abambalwa apho babalaselisa khona incoko yam kwi-Intanethi. KuFacebook, ndixoxa kwaye ndixoxe ngezopolitiko nenkolo kukothuka kwabaninzi. Ndinabantu abambalwa kumzi mveliso abangandilandeliyo kumagqabantshintshi endiwenzileyo okanye amanqaku endiye ndabelana nawo. Abantu abangavumelani nam bandixelela ukuba ndonakalisa ishishini lam ngokuthetha ngemipu, uThixo, nezopolitiko. Abantu abenzayo vu melana cwaka nam unditsalele ecaleni undibulele ngegalelo… nangona bengazami ukuthanda okanye ukugqabaza kumabali endiwabalisayo.
Ndihlala ndabelana nabantu bobabini ukuba ndikhule ngendlela eyahlukileyo. Ndikhule ndingumRoma Katolika, kodwa isiqingatha sentsapho yam singamaYuda. Utata wayengumntu othembekileyo, oligqala, kunye nothanda ilizwe lakhe ... kodwa uMama wam wayengumFrentshi-waseKhanada nosapho olukhululekileyo lwaseYurophu. Ndikhuthazekile ukuba ndithethe phandle ndixoxe. Kwaye imbeko yezinye izimvo yafunwa ngamacala omabini osapho lwam.
Oku kungaba yintsikelelo okanye isiqalekiso. Ukukhula kwam, andizange ndoyike ukubonisana ngentlonelo. Kwandifaka engxakini enkulu kwisikolo samabanga aphakamileyo. Emva kokuba ndithweswe isidanga, ukubhalisela ukuba ngumkhosi wamanzi kwandifundisa uqeqesho nentlonipho. Ukujoyina kwam abasebenzi, ndaye ndacetyiswa ziinkokeli ezazikhuthaza ukuzimela kunye noxanduva lomntu. Yongeza yonke le nto, kwaye yenza umlilo omkhulu. Oko kuguqulelwe kubukho bam kwi-Intanethi.
Kwanele ngam. Ngelishwa, eso sisilo sezilwanyana kwiinkokeli ezininzi zeshishini ezikwi-Intanethi. Ukwabelana kwabo ngokungapheliyo ngobomi babo obugqibeleleyo kuyandikhathaza.
Mhlawumbi yimeko yethu yezopolitiko eyahlukanisayo eyongezwe kukunganyaniseki kwi-Intanethi, kodwa ndicinga ukuba kubi. Ayisiyo-bullcrap nje ecacileyo, kodwa ndiza kuya kuthi ga ngoku ukuba iyasilela kwaye iyingozi. Mhlawumbi inkolo yakho kunye nezopolitiko zezakho kwaye ayisiyiyo into onqwenela ukuyazisa; Ndiyayihlonipha loo nto. Kodwa into endingenakuyihlonipha ngumjelo ongapheliyo wobomi bakho obugqibeleleyo kunye nendlela elingaqhelekanga ngayo ishishini lakho.
Ngaba unokucinga ukuba ungumntu osebenza ekukhuleni kwakho buqu kunye nobungcali, kwaye konke okubonayo kwi-Intanethi ngabantu ojonge phezulu kubo kwi-intanethi abaze basokole? Kubonakala kum ngathi kuya kuba buthathaka. Ndiyakholelwa ukuba bobabini buqu kwaye ndiphumelele emsebenzini kunabaninzi baba bantu-kodwa ngekhe uyazi ukuba ngokuthelekisa iiprofayili zethu ezikwi-Intanethi. Mhlawumbi kungenxa yokuba ndilinganisela impumelelo yam ngabantu abaninzi endibancedayo, hayi elwandle apho ndihleli khona.
Kwaye ngenxa yesizathu esingaqhelekanga, ukuthembeka kwam kwi-Intanethi ngandlel 'ithile kubonwa njengengozi ekuzenzele igama ngabantu abaninzi kumzi mveliso wam. Umzi mveliso kanye ochukumisa amagama anje Kuhleni kwaye nya niseka. Akukho nto bayaziyo.
Kule minyaka idlulileyo, ndiye andalandela amakhulukhulu abantu kwishishini lam, kwaye kukho abambalwa abakhethiweyo endisaqhubeka nokuzibandakanya nabo. Babelana ngokwabo, ngamanye amaxesha babucala kakhulu, ubunzima bempilo yengqondo. Babelana ngemizabalazo yabo yezempilo kunye notshintsho. Kwaye babelana ngemiceli mngeni yabo yeshishini. Ndiyabakhuthaza, kwaye bayandikhuthaza ukuba ndibengumntu ongcono, inkokeli ebhetele, utata ongcono kunye nomntu oneshishini ongcono.
Unganyaniseka njani kwi-Intanethi
Ndiyamangaliswa kukuba ndibhale la mazwi, kodwa ndiyakholelwa ukuba ayimfuneko. Nantsi into endiyithandayo ukubona iinkokheli zentengiso zisenza ngobukho bazo kwi-Intanethi:
Vuma ubuthathaka kunye nemingeni. Sonke sinazo, kwaye kuyakhuthaza xa umntu omjongileyo ekwabelana naye.
Buza ngoncedo. Wonke umntu ufuna uncedo, yeka ukuzama ukwenza ngathi unazo zonke iimpendulo.
isabelo ukujonga ngakumbi. Ngabaphulaphuli kunye nokufikelela kwaba bachaphazeli, yintoni engakholelekiyo xa bevuma abo basokola ukufumana ingqwalaselo kwi-Intanethi?
Khuthaza abanye bangakufezekisa oko ukufezileyo. Sonke siyoyisile ubunzima ukuze sifike kule ndawo sikuyo, sabelane ngendlela ofike ngayo kule ndawo ukhoyo masibazise ukuba banokuyenza, nabo.
Imithombo yeendaba kwezentlalo ibonelela ngeli thuba lingakholelekiyo lokwakha unxibelelwano lomntu kwi-intanethi. Akukho nto yomntu ngaphandle kokuthobeka, ukusilela, ukuhlangulwa, kunye nokuba buthathaka, ngaba ikhona? Andinakuba nabalandeli abaninzi njengabanye kumzi mveliso wam, kodwa ndiyakuqinisekisa ukuba ndinolwalamano olunzulu kakhulu nabantu abandilandelayo.
Ngokuqinisekileyo, ndinokuyila umntu wobuxoki, sabelane kuphela ngempumelelo yethu yeshishini, kwaye nditsale abalandeli abaninzi. Kodwa ndingathanda ukuba nolwalamano lokwenyani endilwenzileyo kule minyaka idlulileyo kunokuba ndityhale ubuxoki obungafumanekiyo.
tags: ukutshatyalaliswa komntuSocial Media Marketing
Iqonga: Qokelela kwaye ulawule uPhononongo kwiPlatifomu enye eseCaleni
Sep 18, 2016 kwi-9: 10 AM
Andingomnini shishini, uninzi lwento oyithethayo ayisebenzi kum ngqo. Kwaye, andikho kwimidiya yoluntu. (Ndibhala amanqaku oshishino kubahlobo kunye nosapho, ngoko ke ndifumene njani indawo yakho ngelixa ndiphanda.) Nangona kunjalo, ndonwabele kakhulu inqaku lakho - andicingi ukuba ndifumene nantoni na enyanisekileyo ngaphambili. Kuhle ukubona umnini weshishini ophumeleleyo eyigcina iyinyani, ke enkosi.
Sep 19, 2016 ngo-3:33 PM
Enkosi kakhulu, Rita!
Cupernicus uJohn Kelly
Sep 19, 2016 ngo-6:47 PM
Ndingumntu woMoya onamava omntu…mmmm. Mna …eh NCEDA abantu ukuba baphile ubomi babo ngokupheleleyo…ngelixa siqinisekisa ukuba nabo bancedisa abanye njengoko thina…sikhula..
Inqaku eliqaqambileyo ..kodwa ungumhanahanisi...njengoko ndifungayo ….ibhokisi evele yavela yandifumana kwimizuzwana embalwa edlulileyo…ke..YES.ngentlonipho…..ndizakulinda ukuze ndibone ukuba uphendule njani kunye nabo ingaba nencoko...
Sep 19, 2016 ngo-9:48 PM
Ewe, andiqinisekanga ukuba ibhokisi ye-pop up inento yokwenza nam ngokunyaniseka kwimidiya yoluntu. Nceda Ndazise.